နှဈသုံးဆယျကွာမှသီးတဲ့ အမြိုးသမီးတငျပါးပုံ အုနျးသီး – အပြိုတငျအုနျး – Youth Bar
အမြိုးသမီးတငျပါးပုံအုနျးသီးမြားကို ထိုငျးနိုငျငံအရှပေို့ငျး ခြှနျပူရီခရိုငျ ပတ်တရားကမျးခွမွေို့မှာ အမြားအပွားတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ဒီအုနျးသီးတှကေ အနှဈ ၃ဝ ကွာမှ တဈလုံးသီးပွီး သုံးဆယျကိုးနှဈသကျတနျးရှိတဲ့ အပငျကနေ ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ
ဒီအုနျးသီးတှရေဲ့ ရုက်ခဗဒေ အချေါကတော့ ( Lodoicea Maldivica ) ဖွဈပါတယျ. အခွားသောသတငျးဌာနမြားက Lodoicea ဟာ Laodice မှဖွဈလာတာဖွဈပွီး Priam နဲ့ Hecuba သဈသီးတှရေဲ့ သမီးလို့ ဖျောပွကွပါတယျ
အမှာပုံစံအုနျးသီးဖွဈပွီး အမြိုးသမီးတငျပါးပုံစံ ဖွဈနတောကွောငျ့ ထိုငျးလိုတော့ မာချဖရောကျ ကှနျ့ဆောဝျ ( အပြိုတငျအုနျး ) လို့ချေါပါတယျ . အမြားအားဖွငျ့ အပငျဟာ ၂၅ မှ ၃၄ မီတာအထိ ကွီးထှားကွပါတယျ. သဈခုတျပွီးတဲ့နောကျ မွပေျေါမှာတိုငျးတာခဲ့တဲ့အမွငျ့ဆုံးစံခြိနျဟာ စုစုပေါငျးအမွငျ့ ၁၈၆ ပေ (၅၆.၇ မီတာ) အထိတောငျ အပငျမွငျ့ပါတယျ
အရှကျမြားကတော့ ပနျကာ ရှိကာ အရှညျ ၇-၁၀ မီတာ၊ အကယျြ ၄.၅ မီတာရှိပါတယျ. အပငျအိုတှမှောဆိုရငျ ၄ မီတာ ရှညျတဲ့ အညှာ ရှိပါတယျ. အပငျရှယျတှကေတော့ ၉ မီတာ) (၁၀ မီတာ) အထိရှိတဲ့ ပိုမိုရှညျလြားတဲ့ အညှာကိုထုတျလုပျနိုငျပါတယျ
အထီးပငျ အမမြားဆိုပွီး သီးခွားစီရှိပါတယျ ရငျ့တဲ့အသီးတှဟော အခငျြး ၄၀ မှ ၅၀ စငျတီမီတာရှိပွီး ၁၅ မှ ၃၀ ကီလိုဂရမျအလေးခြိနျရှိကွပါတယျ. ဒီအုနျးသီးတှဟော တနျဖိုးအားဖွငျ့ ဘတျသုံးသောငျးခနျ့ တနျဘိုးရှိပါတယျ
နှစ်သုံးဆယ်ကြာမှသီးတဲ့ အမျိုးသမီးတင်ပါးပုံ အုန်းသီး – အပျိုတင်အုန်း
အမျိုးသမီးတင်ပါးပုံအုန်းသီးများကို ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ချွန်ပူရီခရိုင် ပတ္တရားကမ်းခြေမြို့မှာ အများအပြားတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအုန်းသီးတွေက အနှစ် ၃ဝ ကြာမှ တစ်လုံးသီးပြီး သုံးဆယ်ကိုးနှစ်သက်တန်းရှိတဲ့ အပင်ကနေ ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒီအုန်းသီးတွေရဲ့ ရုက္ခဗေဒ အခေါ်ကတော့ ( Lodoicea Maldivica ) ဖြစ်ပါတယ်. အခြားသောသတင်းဌာနများက Lodoicea ဟာ Laodice မှဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီး Priam နဲ့ Hecuba သစ်သီးတွေရဲ့ သမီးလို့ ဖော်ပြကြပါတယ်
အမွှာပုံစံအုန်းသီးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတင်ပါးပုံစံ ဖြစ်နေတာကြောင့် ထိုင်းလိုတော့ မာခ်ဖရောက် ကွန့်ဆောဝ် ( အပျိုတင်အုန်း ) လို့ခေါ်ပါတယ် . အများအားဖြင့် အပင်ဟာ ၂၅ မှ ၃၄ မီတာအထိ ကြီးထွားကြပါတယ်. သစ်ခုတ်ပြီးတဲ့နောက် မြေပေါ်မှာတိုင်းတာခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးစံချိန်ဟာ စုစုပေါင်းအမြင့် ၁၈၆ ပေ (၅၆.၇ မီတာ) အထိတောင် အပင်မြင့်ပါတယ်
အရွက်များကတော့ ပန်ကာ ရှိကာ အရှည် ၇-၁၀ မီတာ၊ အကျယ် ၄.၅ မီတာရှိပါတယ်. အပင်အိုတွေမှာဆိုရင် ၄ မီတာ ရှည်တဲ့ အညှာ ရှိပါတယ်. အပင်ရွယ်တွေကတော့ ၉ မီတာ) (၁၀ မီတာ) အထိရှိတဲ့ ပိုမိုရှည်လျားတဲ့ အညှာကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
အထီးပင် အမများဆိုပြီး သီးခြားစီရှိပါတယ် ရင့်တဲ့အသီးတွေဟာ အချင်း ၄၀ မှ ၅၀ စင်တီမီတာရှိပြီး ၁၅ မှ ၃၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိကြပါတယ်. ဒီအုန်းသီးတွေဟာ တန်ဖိုးအားဖြင့် ဘတ်သုံးသောင်းခန့် တန်ဘိုးရှိပါတယ်
သားသမီးကို စနဈတကြ ဖကျြစီးနသေောမိဘမြား
မွနျမာ့ ပိုကျဆံ ငှစေက်ကူပျေါက လကျမှတျပိုငျရှငျ မောငျကောငျးဆိုတာ ဘယျသူလဲလို့ နှောငျးလူတို့သိစရေနျအတှကျ